Tag: အီးမေးလ်နဲ့လူမှုရေးမီဒီယာ Martech Zone
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 16, 2016 သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 15, 2016 Douglas Karr
အကယ်၍ သင်သည်ဤစာတမ်းကိုခဏတာဖတ်ရှုခဲ့ဖူးပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်အီးမေးလ်ကိုလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်မည်မျှမထီမဲ့မြင်ပြုသည်ကိုသင်သိသည်။ မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အလားအလာအပြည့်အဝကိုမဆိုထုတ်လွှင့်ရန်လမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်၍ ထိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်သင်၏ရလဒ်များကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နှိုင်းယှဉ်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်မေးခွန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုစီမှစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစီနှင့်သင်ရရှိနိုင်သည့် channel တစ်ခုစီတွင်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းကိုသင်မည်သို့သေချာစေနိုင်သနည်း။ အီးမေးလ်? လူမှုရေး? ဒါမှမဟုတ်
အပါအ ၀ င် Instagram ဓာတ်ပုံများတိုးပွားလာသောအီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှု 7x
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 19, 2015 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2017 Douglas Karr
The State of Visual Commerce တွင် Curalate နှင့် Internet Marketing Association မှပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်စျေးကွက်၏ ၈ ရာခိုင်နှုန်းကသာအီးမေးလ်ဖြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ပုံရိပ်များကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနေသည်ဟုအခိုင်အမာယုံကြည်ကြသည်။ အီးမေးလ်များ၏ ၇၆% တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာခလုတ်များပါ ၀ င်သော်လည်း ၁၄% တွင်သာလူမှုရေးပုံများပါဝင်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏မူလကတိက ၀ တ်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ပို၍ လူသိများသောဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီတွေကိုချဉ်းကပ်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှစ် ဦး စလုံးစေသည်။ အဲဒါကိုပေါင်းစပ်
Email နဲ့ Social Media မဟာဗျူဟာတွေကိုဘာကြောင့်ပေါင်းစပ်သင့်တာလဲဆိုတာဒီနေရာမှာကြည့်ပါ
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 21, 2015 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 22, 2015 Douglas Karr
တစ်စုံတစ် ဦး ကဆိုရှယ်မီဒီယာအင်ဖိုဂရမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အီးမေးလ်တစ်စောင်မျှဝေလိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အလွန်အင်မတန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သဘောမတူသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုရွေးရန်မေးခွန်းမဖြစ်သင့်ပါ၊ ၎င်းသည်အလယ်အလတ်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအပြည့်အဝမည်သို့ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ရမည်ဟူသောကိစ္စဖြစ်သင့်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများသည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းပါကအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်များမည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်။ ပြproblemနာကကုန်သည်တွေရဲ့ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းကသာလူမှုရေးကိုပေါင်းစပ်ထားတယ်
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 28, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 26, 2014 Douglas Karr
လူမှုကွန်ယက်နှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည့် Constant Contact အကြီးတန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမန်နေဂျာ Tamsin Fox-Davies ၏ပြောကြားချက်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ လူမှုမီဒီယာနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်သည်ဒိန်ခဲနှင့်ပန်းသီးနှင့်တူသည်။ လူတွေကသူတို့အတူတူသွားမယ်လို့မထင်ဘူး၊ လူမှုမီဒီယာသည်သင်၏အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုတိုးချဲ့ရန်ကူညီနိုင်ပြီးသင်၏စာပို့ခြင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်းကောင်းသောအီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှုများသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာအဆက်အသွယ်များနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေပြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်
ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ Offerpop သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းငါးခုနှင့်အတူထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့သြသင့်သလား - အားလုံးသောဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုနှုန်းကိုပြသနေသလား။ စားသုံးသူများသည် content marketers ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ရိုးရာစျေးကွက်သို့ပိုမိုလူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု။ ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်နှင့်အီးမေးလ်ချိတ်ဆက်မှု။ လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေး ခြုံငုံဆိုရှယ်မီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ပတ်သတ်၍ လုပ်ဆောင်မှုများတိုးပွားလာနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်အကောင်းမြင်မိသည်